Posted by Tranquillus | Oct 14, 2018 | Xafiiska
Waxaad u badan tahay inaad horay u riixday casuumaadda caanka ah sida "U oggolow arjiga X inuu ka helo xogtaada Facebook (ama kuwa kale)", taas oo u oggolaanaysa arjiga inuu kuugu soo diro adiga oo matalaya, marin u helayo macluumaadkaaga shakhsiyeed iyo mararka qaarkood xitaa in loo isticmaalo kuwan ujeeddooyin ganacsi.
Dabcan, aad lahaayeen xiiso weyn, noqon xirfad, ergonomic ama madadaalo u heer inay aqbalaan noocan oo kale ah oggolaansho iyadoo ku hay in aad dheegato doonaa oggolaansho waqtiga. Nasiib darro, muddo ka dib, codsiyada, kuwaas oo bilaabay in la dhiso ilaa, hoos u isticmaalka network, daabacaan adiga oo aan ogolaansho on kooxo kala duwan oo mararka qaar xitaa xaday aqoonsiga aad u gadista qiimaha ugu sarreeya oo aan xitaa isaga u sheegin.
Haddii aad ahayd qof adeegsada warbaahinta bulshada sanado badan, waxaad u badan tahay inaad urursatay rukhsad aan la tirin karin oo badan, sidaa darteed dhammaantood ka helista shabakad kasta waxay qaadan doontaa waqti aad u badan!
Taasi waa sababta ay u jirto xal loo diyaariyey in la dhameeyo dhawr daqiiqadood oo leh codsiyada aan loo baahnayn, kuwaas oo ah codsiga MyPermissions.
Sidee u shaqeeyaa MyPermissions?
Waxaa laga heli karaa Faransiis, Jarmal iyo Ingiriisi, MyPermissions waa codsi kuu ogolaanaya dhowr daqiiqadood oo ah inaad ka saarto codsiyada aan qarsoodi ahayn ama aad u xiiso badan oo kaliya oo xariira shabakadahaaga maalin kadib.
Hawlgalka MyPermissions waa mid aad u fudud, kaliya ku xidhan codsigan shabakadaha bulshada kala duwan si aad u aragto liiska codsiyada la xiriira xisaabahaaga kala duwan.
Waad ku mahadsan tahay liistadaan, waxaad heli doontaa dhammaan macluumaadka la heli karo ee codsiyada kasta, laakiin sidoo kale waxaad ogaan doontaa haddii codsi ka codsado macluumaadka kaliya ee shaqadeeda wanaagsan ama haddii ay isku daydo in ka badan oo dhan si ay u xadaan macluumaadkaaga. macluumaadka shakhsi ahaaneed.
READ Sidee loo Nadiifiyaa Macluumaadkaaga Twitter-ka iyo ilaalinta Sawirkaaga?
Dhinaca kale, MyPermissions waxay kuu ogolaaneysaa inaad tirtirto mid hal guji ah codsiga xulashadaada adoo dib u celi dhamaan ogolaanshaha tan mid isku mid ah. Waxaad awoodi doontaa inaad badbaadiso waqti qiimo leh oo si wax ku ool ah u kala soocaya wax kasta oo aan faa'iido lahayn.
Sidaa darteed, adigoo u mahadcelinaya adeegsigaan macquul ah, macaamiisha iyo waxtarka leh, uma baahnid inaad ka welwesho codsiyada cayiman iyo aan la isticmaalin. Waxa kaliya oo lagaa rabaa inaad haysatid kuwa runtii ku shaqeeya ama xitaa tirtirto dhammaantood si aadan ugu walwalin.
Intaa waxaa dheer, MyPermissions waxay u adeegtaa sidii qalab ilaalin ah si loo xaqiijiyo in codsiyada cusub aan la rakibin adoon lahayn aqoontaada adigoo si aan khalad ah u riixin xiriiriye. Dhibaato dhab ah oo internetka ah ayaa lagu daboolay dabaysha si ay u xadidaan xogtaada markasta.
Mid waliba waa la yaabi karaa haddii isticmaalka codsiga in laga saaro codsiyada kale ma noqonayo ceeb iyo haddii MyPermissions aysan ahayn, ugu danbeyntii, codsi kale oo lagu ururiyo xogtaada.
Naso, MyPermissions-ka uma ogolaanayo inay ku kaydiso macluumaadkaaga sinnaba waxayna kaliya waydiisan doontaa rukhsadaha ugu yar si looga saaro codsiyada aad dooratay. Waxaa intaa dheer, haddii aadan rabin inaad ku sii haysato wax barnaamijyo ah shabakadahaaga, marwalba waad iska tirtiri kartaa gacanta wakhti kasta!
Marka, ha sugin wax intaa ka sii dheer oo bilow nadaafadda weyn!
Sida loo nadiifiyo shabakadahaaga bulshada daqiiqado leh Mypermissions? Agoosto 25th, 2020Tranquillus
horeDiscover AccountKiller, hagaha isticmaalaha guud oo kaa caawiya inaad ka takhalusto xisaab celinta dib-u-dejinta.
socdaEmail Template ee Dalbashada